12 Nzira dzeKusika Zvemukati Zera | Martech Zone
Chitatu, October 26, 2011 Svondo, Nyamavhuvhu 26, 2012 Douglas Karr
Takanga tine zvinoshamisa webinar nezuro ne PR Newswire uye Zoomerang, vanhu vanopfuura 1,600 vakanyoreswa !!! Iyo webinar yaive yakabatana webinar ne John O'Connell, PR uye Nyanzvi yekutaurirana kubva HNTB.
Iyo gumi nembiri nzira yekugadzira zvemukati zera:
Nzwisisa iyo chinangwa yevashanyi vako.
Regedza kutengesa uye kupa kukosha kune vaverengi vako panzvimbo.
Tsvaga izvo vatengi vako uye tarisiro inoda!
Dyisa manzwiro: zvinyorwa, odhiyo, vhidhiyo uye inowirirana midhiya.
Ita ongororo uye pota zano renyowani zvemukati.
Endesa iwo iwo iwo meseji nzira dzakasiyana kuburikidza neese mutsva mutsva.
Muchinjikwa-kukurudzira imwe neimwe masvikiro kune mumwe nemumwe.
Tanga zvemukati zvemoto! Kutanga kushandisa Infographics.
Gonesa uye kukurudzira kugovana munharaunda… Wedzera mabhatani enharaunda!
Iva wakangwarira uye kuvhima pasi vateereri vatsva nekusimudzira zvirimo.
Nhamba mhedzisiro uye shandisa zvinoshanda zvakanyanya.
Kumuka Zvekare zvemukati uye shandisa zvakare uyezve kusimudzira iyo!
Emailvision Inotangisa Email, Yemagariro uye Kwevatengi Njere